ဟိုတစ သည်တစ အပိုင်းအစများ (သို့) အလွမ်းငှက်
နှလုံးသားဖြင့် ထုဆစ်ထားသော မျှော်လင့်ခြင်း ကောင်းကင်သည်တစစီပြိုကွဲ မိုးသားတိမ်တိုက် တို့နှင့်အတိပြီးလေပြီ...ဆောက်တည်ရာမဲ့ ဖြေပြေရာမဲ့ နားခိုရာမဲ့ကြွေလုလု ရော်ဝါရွက် သည်.... လေရူး၏ ကြည်စယ်မှု အောက်တွင် အလူးအလဲ ကြွေချိန်တန်ပြီလား ... ဝေချိန်ကုန်သည်များလား.သိမ်ရာသီ
၀ါခေါင်မိုးဖြင့် လှမ်းလာခဲ့သော ခတ္တာသည်မုတ်သုန်မိုးနဲ့အတူ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ဂန္ထ၀င် တို့သည် တောက်တောက်ပြောင်ပြောင် စိမ်းလဲ့ကုန် ၏မိုးလင်းငှက်တို့၏ သီချင်းသံ နှင့်အတူအိပ်မဲ့ည ဒုက္ခနှင့်လူ၏ သီချင်းသံသည် အဘယ်မှာ ကာရံညီမည်နည်းမီးပုံတွင်းမှ အကြိမ်ကြိမ် ရှင်သန်ထမြောက်သော ဖီးနှစ်ငှက်ကို လေးစားခဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရုန်းထွက်ဖို့ကြ လွယ်မယောင်နဲ့ခက်ငွေလမင်းကိုနမ်းတဲ့ညရာဘင်ဒြာနတ်တဂိုး၊ ရှယ်လီ၊ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) တို့ရဲ့ကဗျာများမှော်ဝင်ခဲ့တဲ့ညဘယ်တော့မှမမေ့မဲ့ည
Posted by mr sann oo at 7:16 PM
The Knightsbridge is ugg boots classic tall style that keeps toes comfortable all year round. Kate Hudson, Eva Longoria, Britney Spears and Kate Wins let have all sung the praises of ugg and have been photographed wearing uggs . Made of natural sheepskin and lined with shearing wool, ugg nightfall make use of natural materials to make shoes that make your feet feel like ugg nightfall boots just slipped intoalittle bit of Heaven.
Secrete of Tarot
My Sale CDs-2
My Sale CDs-1
I have nothing !!!
သြ ... မိန်းမ
Drinking cold fresh water, during the Summer time ...
၂၀၀၇ ခုနှစ် နှင့် အယ်လ်နီညို
ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်နှင့်ကျမ်းမာရေး (Aloe & Health)...